Ukukhethwa kweNdalo, i-macroevolution, kunye neentlobo zeeNgqungquthela
Ubona ubungqina obunzulu bokubakho kokuziphendukela kwemvelo buboniswa ngokuthe ngqo ngokuziphendukela kwemvelo. Abadalwa bezilwanyana bathi ukuziphendukela kwemvelo akuzange kuphawulwe xa, ngokwenene, kuye kwabonakala kwilebhu nakwiindawo ngokuphindaphindiweyo.
Ngaphezu koko, iziganeko ezibonakalayo zokuziphendukela kwemvelo zenzeka kwimeko yokukhethwa kwendalo, eyona nkcazelo ebalulekileyo yokuguquka kwezinto eziguquguqukayo kwimfundiso yokuziphendukela kwemvelo.
Ingqongileyo ibonakala ukuba isebenzise "amandla" kubemi kangangokuba abantu abathile banokuthi basinde kwaye badlulisele iigciwane zabo kwizizukulwana ezizayo. Kukho imizekelo emininzi kule ncwadi, akukho nanye ekufundwa kwendalo.
Inyaniso yokuba ukhetho lwendalo lusebalulekileyo kubeni sinokuqiniseka ukuba kukho utshintsho lwendalo kwimeko edlulileyo. Ngenxa yoko, sinokulindela ukuba izinto eziphilayo ziguquke ukuze zilungele imimandla yazo. (Qaphela: Kuyamkelwa ngokubanzi ukuba ukhetho lwemvelo aluyiyo kuphela inkqubo ekusebenzeni ekuziphendukeleni kwemvelo. Ukuziphendukela kwemvelo nokungathathi hlangothi kudlala indima. Kukho ukungavumelani malunga nokuba ininzi kangakanani inkqubo inceda ekuziphendukeleni kwemvelo; inkqubo yokuguqulela.)
Iintlobo zeeNdlu kunye noVikeleko
Kukho uhlobo oluthile lwezilwanyana ezithatha ingxoxo. Cinga umgca ochanekileyo kwiphondo elithile elincinane.
Kukho iintlobo ezimbini ezahlukileyo kodwa ezinxulumene ngokusondeleyo ekupheleni kwayo, yithetha inqaku A kunye nephuzu B. Ezi ntlobo aziqhelwanga ngokuqhelekileyo, kodwa kukho ukuqhubeka kwezinto eziphilayo kumgca olwa phakathi kwazo. Ezi zityalo zilolu hlobo lokuba ukufuphi kwakho ukuba ukhangele i-A ngakumbi njengezilwanyana kwinqanaba A eziphilayo kumgca, kwaye ukusondeza kwakho kukukhomba B njengento yezilwanyana kwinqanaba B eziphilayo.
Ngoku, cinga ukugoba lo mgca kangangokuba ezi ziphelo zombili zisesendaweni enye kunye "neendandatho" zenziwa. Le yinkcazo ebalulekileyo yeentlobo zeendandatho. Unemihlathi emibini engapheliyo kunye neyohlukeneyo ehlala kwindawo enye kunye nokukhupha phezu kwendawo ethile ukulandelana kwezidalwa ezifana nokuba, "kwindawo ede kakhulu" kwindandatho, izidalwa ziyinxalenye enkulu yeentlobo ezimbini ezihlukeneyo kwiindawo zokuqala. Oku kuphawulekayo kuba kubonisa ukuba ukuhlukana kweentra-zintlobo kunokuba lukhulu ngokwaneleyo ukuvelisa ukuhluka kwe-interspecies. Ukwahlukahlukana phakathi kweentlobo ke ngokohlobo olufanayo (nangona kungekhona kwinqanaba) njengento eyahlukileyo phakathi kwabantu kunye noluntu phakathi kwezilwanyana.
Ubume bubonakala nje buhluke kwiintlobo ezingafaniyo nakweyiphi na ixesha kunye nendawo. Ukuba ukhangele i-biosphere yonke ixesha, "imiqobo" phakathi kweentlobo ibonakala ngakumbi. Iintlobo zeendandatho ngumzekelo wale nyaniso. Ngenxa yokuqonda kwethu iindlela zokuphila zobomi, kunengqiqo ukucinga ukuba olu luhlaza luya ngaphezu kweentlobo zezilwanyana ukuya kumgangatho ophezulu olwahlukileyo lwentlawulo phakathi kweentlobo.
Ukuguquguquka kweMacroevolution vs. Microevolution
Njengokuba kusetyenziswa iindlela zokuzalwa zofuzo, abadali bemvelo bayakuchaza ukuba kukho umgca womlingo apho ukuziphendukela kwemvelo kungeke kushukume.
Yingakho i-creationists ichaza ukuguquguquka kwezinto ezinzulu ngokungafani nokuziphendukela kwemvelo. Ekubeni i-speciation iye yaboniswa, ukuguquka kwezinto ezinzulu kuye kwagcinwa ngokwemfundiso yokuziphendukela kwemvelo; kodwa kwindalo yendalo, ukuguquguquka kwemvelo kukuguquka kwimihlobo. Nangona iimbali zendalo aziyi kukhankanya ukuba ukhetho lwendalo aluveli. Bathi nje ukuba utshintsho olunokuthi lwenzeke lunqunyelwe kwiinguqu ngaphakathi kwimizimba yomzimba.
Kwakhona, ngokusekelwe ekuqondeni kwethu i-genetics kunengqiqo ukucinga ukuba kunokwenzeka ukuba utshintsho olukhulu lube khona kwaye akukho zizathu ezingqiqweni okanye ubungqina bokuxhasa imbono yokuba ayikwazi ukuba khona. I-Creationists yenza njengokuba iintlobo zineenkcukacha ezilukhuni ezidibanisa zona.
Ingcamango yeentlobo ayikho into ehambelanayo: umzekelo, kwizilwanyana zesini unqongophala wokuvelisa "umqobo". Ngelishwa, ingcamango yokuba izinto eziphilayo zihlukeneyo ngendlela ethile yemilingo eyenza zihluke omnye komnye azixhaswanga bubungqina.
Iintlobo zeendandatho zibonisa oku ngezinga elincinci. I-Genetics ibonisa ukuba akukho sizathu sokuba akufanele sibe yinyaniso kwizinga elikhulu.
Ukuthi iintlobo ayikwazi ukutshintsha ngaphaya komda othile "onobubele" kukudala umgca wokuhlula ngokungabonakaliyo ongenazo izityalo ze-biological okanye zesayensi-yoko kutheni abadali bemvelo abazama ukwenza iingxabano malunga 'neentlobo' abanako ukubonelela ngokuhambelanayo, inkcazelo ebalulekileyo yintoni "ububele". Ukungafani ngokukhawuleza "ngaphantsi" umda kuya kufana neentlukwano ngokukhawuleza "ngasentla" umda. Akukho sikhokelo esilungileyo sokudweba nayiphi na umgca.
Into ebalulekileyo ukwazi ukuba ukuziphendukela kwemvelo kuye kwabonwa kwaye kubhalwe kwaye iziganeko eziphawulayo zixhasa imbono yokukhethwa kwendalo. Kunengqiqo kwaye kunengqiqo ukugqiba ukuba ngokungabikho kwinto ethile yokuthintela, iziganeko ezizodwa ziza kubakhokelela ekuhlaleni apho izityalo eziza kubalwa kwiintlobo ezahlukeneyo, iintsapho, imiyalelo, njl.
Inkcazo yeZenzo ezingakholelwa kuThixo
I-Matrix: Inkolo kunye nobuBuddha
Ngaba Abakholelwa KuThixo Bokuba Nenkolo? Ngaba kukho iNkolo yamaThandi?
I-Ayn Rand Quotes kwiNkolo nangesizathu
I-SAT Izikolo zokufakwa kwiiKholeji eziphezulu zeNew York neeYunivesithi
Izibonelelo zeentlanga zamaCelt
Imbali yeSetector Detector
I-PGA Tour: I-Tour Championship
Iingqungquthela zamaLungelo eNkcubeko
Izibonelelo eziphilileyo zeBhank Mountain